सँगै खाना खाने साथी थिए, लागुऔषध चोरेको झोकमा घाँटी रेटिदिए ! - Nilokhabar
Home समाचार सँगै खाना खाने साथी थिए, लागुऔषध चोरेको झोकमा घाँटी रेटिदिए !
सँगै खाना खाने साथी थिए, लागुऔषध चोरेको झोकमा घाँटी रेटिदिए !
काठमाडौं । कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ का २५ वर्षीय अरुण दासको हत्या प्रकरणमा प्रहरी अनुसन्धान जारी छ ।
यही पुस पहिलो साता जानकी गाउँपालिका–९ का २५ वर्षीय अरुण दासको घाँटी रेटेर टाउको छिनालेको अवस्थामा शव फेला परेको थियोे । स्थानीय अमरावती सामुदायिक वनमा नग्न अवस्थामा घाँटी रेटेर टाउको अलग पारिएको अवस्थामा दासको शव फेला परेको थियो ।
हत्यापछि अरुणलाई आफूहरूले मारेको भन्दै मनोज नामका एक व्यक्तिले आफूनिकट एकजनालाई गरेको टेलिफोन संवाद सार्वजनिक भएको थियो । सोही अडियोको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको
प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार मनोज र दास एउटै समूहका साथीहरू थिए । उनीहरू सँगैसँगै खाना खाने, घुम्ने र मिल्ने साथी रहेको खुलेको छ । निम्नवर्गीय परिवारका दास र मनोजको समूह लागुऔषध कारोबारी र प्रयोगकर्ता समेत हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
मनोजले आफूले मारेको भनिएको अडियोमा एक थप्पडको बदला लिन अरुणको हत्या गरिएको आशय व्यक्त गरिएको पाइएको थियो । प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार दासले लागुऔषध चोरेको हुन सक्ने आशंकामा हत्या गरिएको हो
प्रहरीले अनुसन्धानका लागि कमल साउदलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । उनले मनोजको अडियो मृतककी श्रीमतीलाई पठाएका थिए ।
घटनामा संलग्न मनोजसहितका सबै आरोपी भारतमा लुकेर बसेको प्रहरी दाबी छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी वेदप्रकाश जोशी घटनामा संलग्न सबैको पहिचान भइसकेको बताउँछन् ।
उनले भने, “सबै अभियुक्तको पहिचान भइसकेको छ । घटनामा पाँच÷सातजनाको संलग्नता देखिन्छ । उनीहरू सबै भारतमा रहेको सूचना छ । यसका लागि हामी भारतीय पक्षसँग आवश्यक समन्वयमा छौँ ।”
डीएसपी जोशीले मृतक दास र आरोपीहरू चिनजानकै साथी रहेको खुलेको पनि बताए । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लागुऔषधकै कारण घटना भएको खुलेको डीएसपी जोशीको भनाइ छ ।
Previous article५ दिन देखि बे’पत्ता १६ वर्षीया युवतीको श’व फेला , ह’ त्या’को आ’रोपमा ४ जना प’क्राउ
Next articleकमलाले कालो सुचिमा राखेका फोन नम्बरमा सम्पर्क गर्दा ,यस्तो भेटियो (हेर्नुस् भिडियो )